Dhamma Video - Browse Media - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ
P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ - Most Recent
P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အဖြူနဲ့အမ...
အဖြူနဲ့အမဲ တစ်မူကွဲ တရားတော် (ဖြူဆရာတော်)
Tags: အဖြူနဲ့အမဲ တစ်မူကွဲ တရားတော် (ဖြူဆရာတော်) phyusayardaw phyu sayardaw sayartaw P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အဖြူနဲ့အမ...
Tags: အဖြူနဲ့အမဲ တစ်မူကွဲ တရားတော် (ဖြူဆရာတော်) ဖြူးဆရာတော် phyusayardaw phyusayartaw phyu sayardaw sayartaw P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သိမ်တော်မ...
သိမ်တော်မင်္ဂလာ - ဖြူးဆရာတော်
Tags: ဖြူးဆရာတော် , သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , ၀ံသာနု , phyusayardaw , phyu sayardaw , phyu sayartaw P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အနှစ်သုံး...
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , ၀ံသာနု , ဖြူးဆရာတော် , သာသနာ့ပါလ , သာသနပါလ , phyusayardaw , phyu sayardaw , tharthanaparla , sarsanaparla , thar tha na par la , sar sa na par la P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အနီးအဝေး...
အနီးအဝေး သုံးနှင့်လေး- ဖြူးဆရာတော် (၀ံသာနု တရားတော်)
Tags: ၀ံသာနု သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဖြူးဆရာတော် အနီးအဝေး သုံးနှင့်လေး ၀ံသာနုတရားတော် phyu sayardaw phyusayardaw sayartaw wuntharnu wun thar nu tharthanaparla sarsanaprla thar tha na par la sar sa na par la သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - U ThuMinGaLa - ဥူးသုမင်္ဂလ ဒယ်အိုးဆရာတော် ဆရာတော်ကြ...
မှော်ဘီမြို့ မင်္ဂလာတိုက်အတွင်းကျင်းပပြုလုပ်သော သံဃာပူဇော်ပွဲ၌ ဆရာတော်ကြီးများ မိန့်ကြားတော်မူသည့်...
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ, သီတဂူဆရာတော်, ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ, အောင်ဆန်းဆရာတော်,သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဖိတ်ခေါ်ပါ...
ဘဒ္ဓ န္တနရပတိ (ဖြူးဆရာတော်) - ဖိတ်ခေါ်ပါသည် အိုယောဂီ ၁+၂
Tags: ဦးနရပတိ(ဖြူးဆရာတော်) - unarrapati u_narrapati unarapati u_narapati phyuu sayartaw sayardaw P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သီတင်းကျွ...
ဘဒ္ဓ န္တနရပတိ (ဖြူးဆရာတော်) - သီတင်းကျွတ်တိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းသည်တရားတော် ၁+၂
Tags: ဦးနရပတိ(ဖြူးဆရာတော်) - unarrapati u_narrapati unarapati u_narapati phyuu sayartaw sayardaw P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပါဝေယျကဆင...
ဘဒ္ဓ န္တနရပတိ (ဖြူးဆရာတော်) - ပါဝေယျကဆင် တိုက်ပွဲဝင်တရားတော် ၁+၂
Tags: ဦးနရပတိ(ဖြူးဆရာတော်) - unarrapati u_narrapati unarapati u_narapati phyuu sayartaw sayardaw P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မဂ္ဂင်ရှစ်...
ဘဒ္ဓ န္တနရပတိ (ဖြူးဆရာတော်) - မဂ္ဂင်ရှစ်တန်ရထားပျံ(သမဏသုတ္တန်)တရားတော် ၁+၂
Tags: ဦးနရပတိ(ဖြူးဆရာတော်) - unarrapati u_narrapati unarapati u_narapati phyuu sayartaw sayardaw Pages: 12of 2